War-murtiyeed ay soo saareen Xildhibaanada labada Aqal ka tirsan | KEYDMEDIA ONLINE
War-murtiyeed ay soo saareen Xildhibaanada labada Aqal ka tirsan
Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee BJFS ayaa waxay soo saareen War-murtiyeed ku aaddan cabashada waalidiinta caruurtoodu ka maqan tahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanno ka tirsan labada Aqal ee BJFS ayaa waxay soo saareen War-murtiyeedka kulankii dhex maray mudanayaasha maalinimadii shalay oo ay la yeesheen waalidiin ka cabanaysay caruur ay dhaleen kuwaasoo aan wax war ah ka hayn tan iyo markii tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eratariya.
War-murtiyeedka oo ka koobnaa dhowr qodob ayey xildhibaanadu uga hadleen in dowladdu marin habaabin ku sameeyeen xogta ku saabsan dhallinyarada tababarka loo diray, sidoo kalena waqtiga la qaaday dhallinyaradaas ayaa lagu sheegay in ay udhaxaysay sanadihii 2018-2020 iyadoo si qarsoodi ah lagu geeyay waddanka Eratariya.
Xildhibaanada ayaa War-murtiyeedkooda ku sheegay in ay jiraan qaar kamida waalidiinta oo lasoo darsay xanuunno kaddib maqnaashiyaha caruurtooda oo nolol iyo geeri midna aan lagu hayn, waxayna dowladda ku eedeeyeen in aysan jirin cid kala hadashay oo warbixin ka siisay waalidiinta dhalay ubadka maqan.
Xubnaha labada Aqal ee kulanka qabanqaabiyay waxaa hormuud u ah Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Aqalka Sare Senator Abshir Axmed Bukhaari, waxayna si wada jir ah u soo saareen qodobo dhowra, waxayna soo jeediyeen in la sameeyo guddi howleed kala duwan oo qaban doona shaqooyin dhora sida:
Tira-koobka dhallinyarada la askareeyay ee dalka Eratariya loo qaaday.
In ay xiriir la sameeyaan RW Rooble iyo hay'adaha ku shaqada leh arrintan.
In la howl galiyo xeeldheerayaal sharci oo ka talo bixiya arrinta
Iyo in lalal sameeyo xiriir xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha;
Halkan hoose ka akhriso War-murtiyeedka oo dhammeystiran: